testosterone ဟော်မုန်းနဲ့လိင်အကြားဆက်နွယ်မှုတွေပါ ၀ င်တဲ့ web ပေါ်မှာရှုပ်ထွေးတဲ့အချက်အလက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဤသည် orgasm, တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း, abstinence နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အော်ဂဇင်ကအာရုံကြောဓာတုဗေဒနှင့်ဟော်မုန်းများအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုအမှန်ပင်ပုံဖော်သည် ဆက်ရေးရန်စတင်နှင့်ကျိန်းသေပိုမိုရှုပ်ထွေးမျှသာ testosterone ဟော်မုန်းထက်။
testosterone တစ်ကစား အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ erectile တစ်ရှူးများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်သွေးကြောများနှင့်အာရုံကြောလိင်တံထောက်ပံ့။ မည်သည့်အဆင့်တွင် testosterone ဟော်မုန်းသည်ကျန်းမာစေသနည်း။ အနည်းငယ်မော်ဒယ်မော်ဒယ်များသာ 10% သာလုပ်လိမ့်မည်ဟုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုအများစုက၎င်းသည်အလွန်နည်းသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ တစ်နည်းနည်းဖြင့်, ED ဖြစ်ပေါ်စေဖို့လုံလောက်တဲ့အနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့် 40 ၏နှစ်အောက်လူအလွန်ရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ အတော်များများကလေ့လာမှုများနှင့်အတူကျန်းမာယောက်ျားနှင့်ယောက်ျားအလားတူ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်သတင်းပို့ ရှည်ကြာသော ED (1, 2, 3, 4) ။ ကြည့်ပါ - Testosterone နဲ့ Erectile အလုပ်မဖြစ်။
ကို ကျေးဇူးပြု. သတိပြုပါ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်" အနောက်တိုင်းဆေးဝါးကုသမှုမခံယူရသေးပါ။ ရိုးရာတရုတ်ဆေးပညာသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဟုလူသိများသောလက္ခဏာများနှင့်လက္ခဏာများကိုအသိအမှတ်ပြုပါသည်။ testosterone ဟော်မုန်း ၇၀၀% တိုးလာတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကဒီ post ကိုကြည့်ပါ။ Testosterone တိုးတာဟာသင့်ကိုလုံးဝယုံကြည်မှုမရှိစေဘူး။)
လူ့နှင့်တိရိစ္ဆာန်ဆိုင်ရာသုတေသနပြုမှု၏ကြွယ်ဝမှုကသွေးကြော testosterone level အပေါ်သိသာသောရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်မှုမရှိခြင်းသည် ၇ ရက်ပတ်လုံးရက်ဆက်နေခြင်းကိုရှောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းဆေးစွဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဟော်မုန်းပမာဏအပေါ်လေ့လာမှုမရှိသေးပါ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သည့် neuroendocrine သက်ရောက်မှုများရှိသည်ဟုယူဆခြင်းသည်မဆင်ခြင်နိုင်ပါ။ စာဖတ်သူများ (အထူးသဖြင့် r / nofap) အားရှုပ်ထွေးခြင်းမပြုရန်သတိပေးထားသည် သုတ်ရည်လွှတ်၏ဆိုးကျိုးများ နှင့် တစ်ဦးပြင်းထန် porn စွဲ၏ဆိုးကျိုးများ.
အောက်ပါဆောင်းပါးနှစ်ခုသည်လက်ရှိစာပေအပေါ် အခြေခံ၍ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသိပ္ပံနည်းကျရှင်းလင်းချက်များဖြစ်သည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်ပစ်သူများ၏အများအားဖြင့်ကြုံတွေ့ခံစားနေရသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုသူတို့ဖုံးအုပ်ထားသည်။
သူတို့ကြည့်ရှု reboot ကျသောအခါယောက်ျားတွေတွေ့ကြုံခံစားအကျိုးကျေးဇူးများနောက်ကွယ်ကသိပ္ပံများအတွက် Porn၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့် Mojo - အာရုံကြောသိပ္ပံအမြင် - ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများသည်များသောအားဖြင့်၎င်းတို့၏ Mojo ကိုပြန်လည်ရယူကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်?
ဤဆောင်းပါးသည်သန္ဓေတည်ခြင်းနှင့်သန္ဓေတည်ခြင်းအားဖြင့်“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု” သို့ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုဖော်ပြသည်။ အမျိုးသားများအတွက်: မကြာခဏသုက်တစ်ဦးက Hangover စေပါသလား?
testosterone ဒဏ္ဍာရီနှိုင်းယှဉ် testosterone သုတေသန - ကျွန်ုပ်သည် T အဆင့်ဆင့်၊ သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်း၊ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်အမျိုးသားများခံစားရသည့်အကျိုးကျေးဇူးများနောက်ကွယ်ရှိအရာအများစုနှင့်ပတ်သတ်သောအဓိကဒဏ္Iာရီများကိုငါဖြေရှင်းသည်။ သူတို့ရဲ့အရေးပါမှုကိုရှင်းပြလေ့လာမှုများနှင့်ဝေဖန်သုံးသပ်ပါရှိသည်။
အလွန်အကျွံတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုငါ့ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုလျော့ကျပြီလော - မဖြစ်နိုင်ပါ၊ သို့သော်သင်ဤစာတမ်းကိုဖတ်လိုပေမည်။
ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါပိုးရှိသူများသည်များသောအားဖြင့်နံနက်သစ်သားမရှိခြင်းကိုကြုံတွေ့ရသည်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဟုညဥ့်နက်သောစိုက်ထူခြင်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောသွေးဆောင်ခြင်း ED အကြောင်းမပြောနိုင်ပါ။ သို့သော်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောတွေ့ရှိချက်များက testosterone ဟော်မုန်းသည် nocturnal စိုက်ထူမှုအတွက်အရေးကြီးသော်လည်း၊ nocturnal စိုက်ထူများအတွက်လိုအပ်သော testosterone, ဒါပေမယ့်စိုက်ထူ dopamine အပေါ်မူတည်နှိုး။
တစ် ဦး rebooter ထံမှအတွေးများ
ဒီလင့်ခ်တွေကိုမဖတ်ခင်ဒီမှာကမှတ်ချက်ပေးပါ ပြန်လည်ထူထောင်အသုံးပြုသူ (ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာပရော်ဖက်ရှင်နယ်) သူနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းရှိစေခြင်းငှါ, စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့သူတစ်ဦးနှေးကွေး reboot အကြံပေး:
ငါ၌မကြာသေးမီကအမှန်တကယ် T နိမ့်သူဖြစ်သည်ဟုသိရသောသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိသည်။ သူသည်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ tyranosaurus အဖြစ်လူသိများသည်။ ပုံမှန် lecherous တဲ။ ငါသံသယမရှိ ED မရှိပါ။ သူသည်မျက်နှာဆံပင်မပေါက်၊ ကြွက်သားများ ၀ တ်ဆင်ရန်အလွန်ခက်ခဲသောအချိန်နှင့်ပုံသဏ္outာန်အလွန်ပျက်ပြားသည်။ သူသည်အမျိုးသမီးများနှင့်အလွန်အောင်မြင်ပြီးသူ၏ပင်ကိုစရိုက်နှင့်သူ၏andတ္မျက်နှာကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူကသာယာလှပတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ။
သင်၌ T နည်းနေပြီး၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာဖြစ်လျှင်တောင်သင်သည်နံနက်သစ်သားပိုများနိုင်သည်။ သင်လက်ရှိထက်ပိုပြီးနှိုးဆွနိုင်သည်။ ငါကိုယ်တိုင်ထူးထူးခြားခြားမြင့်မားတယ် T. ပြီးတော့မင်းရဲ့ libido နဲ့ပြခဲ့တဲ့ပြallနာအားလုံးကိုငါဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။
testosterone ဟော်မုန်းအကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောပြပါရစေ။ သင်သည်လိင်ကိုမလိုလားဟုထင်ရသည့်အတွက်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့လျှင်သင်အမှန်တကယ်လိုချင်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဤအချက်ကိုစဉ်းစားပါ - အကယ်၍ သင်မငတ်ပါကသင်မစားဘဲနေလိမ့်မည်။ ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုမရှိတာကိုမင်းကစိတ်အနှောင့်အယှက်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ သို့သော် အကယ်၍ သင်ဗိုက်ဆာနေလျှင် (အစာအိမ်ပေါက်နေခြင်း၊ အားနည်းနေခြင်းစသည်တို့) နှင့်အမှန်တကယ်အစာနှင့်အတူပါလာသောအခါ salivate ပျက်ပြားခြင်းနှင့်၎င်းကိုစားရန်ခက်ခဲသောအချိန်ဖြစ်လျှင်၎င်းသည်အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းလိမ့်မည်။ ဤပြproblemနာသည်သင်၏ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ သင်၏ ဦး နှောက်နှင့် drive ကိုဖြည့်ဆည်းရန်သင်၏စွမ်းရည်နှင့်အတူဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကသင်၏ ဦး နှောက်နှင့်ညစ်ညမ်းသောပြisနာဖြစ်သည်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျနော်သင်သည်သင်၏ reboot ဆက်လက်သမျှမည်သည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်မှာရှာဖွေနေကိုရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အစွန်းရောက်ရယူပါ။ အဘယ်သူမျှမတီဗီမရှိငြိမ်ပုံရိပ်မရှိမဂ္ဂဇင်း pics ။ အစစ်အမှန်ကမ်ဘာပျေါတှငျသာအစစ်အမှန် 3D အမျိုးသမီးတွေ။
၁၄ ပတ်ကြာအောင်သင်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့ကိုအချိန်ပိုမိုနှင့် / သို့မဟုတ်တကယ့်ရည်းစားလိုအပ်ပါတယ်ဟုဆိုသည်။ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း၊ PMO မပါ ၀ င်ပါနှင့်၊ သင်၏ penile လုပ်ဆောင်မှုကိုပင်စိတ်မပူပါနှင့်။ လိင်နှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးကိုစိတ်ထဲမထားပါနှင့်။
သင်မသိခင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်၊ အပြာရောင်မှအောက်သို့လှုပ်ရှားမှုကိုသင်ခံစားရလိမ့်မည်။ ဒါဟာမင်းထဲကငရဲကိုအံ့အားသင့်စေလိမ့်မယ်။ သို့မဟုတ်သင်၏နံနက်သစ်သားသည်ပြန်လာလိမ့်မည်။
ငါ 150 ကျော်ရက်ပေါင်းအဘို့အညစ်ညမ်းမှုကိုချွတ်ခဲ့ကြနှင့်အချိန်ကုန်လွန်အဖြစ်တိုးတက်မှုသတိထားမိနေပါတယ်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအရာဖြစ်သော်လည်းပျက်စီးမှုကိုယခုအချိန်အထိပင်ပြန်လည်ပြုပြင်နေဆဲဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုကပ်ပြီးသင်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာသံသယမဝင်ပါနဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏မူလဘိုးဘွားများသည်အတွင်းခံမဂ္ဂဇင်းများကိုကြည့်ရှုရန်မလောက်ခဲ့ပါ။ ထိုသူတို့ကသိသာ libido အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။
လိင်ကျော်လွန် testosterone (2016)
testosterone Gel အမျိုးသားများအဘို့ကြိုးနှံအကျိုးကျေးဇူးများရှိထားသည်, လေ့လာမှု (2016) Says
testosterone ဒဏ္ဍာရီနှိုင်းယှဉ် testosterone သုတေသန